Tahotra ny firaiketam-po akaiky: antony, famantarana, ary ny fomba handresena azy - Fifandraisana
Tahotra ny firaiketam-po akaiky: antony, famantarana, ary ny fomba handresena azy
Ny fahatahorana ny fifandraisana akaiky dia manimba ny fahafaha-manao zava-dehibe hananganana fifandraisana akaiky sy fisakaizana amin'ny olon-kafa.
Ny firaiketam-po dia fihetsika fizarana fahalemena sy fifandraisana akaiky ara-batana sy ara-pihetseham-po amin'ny olona hafa.
ny fomba fanamboarana fifandraisana tapaka rehefa avy mandainga
Matetika ny olona mahatsapa izany tahotra izany dia manimba ny fifandraisany manokana na manosika ny olona alohan'ny hanatonany akaiky.
Mangetaheta fifandraisana akaiky izy ireo, saingy sarotra amin'izy ireo ny mahazo sy mitazona izany rehefa manomboka manohina ny fanahian'izy ireo izany.
Ny fifanatrehana sy ny fandresena ny tahotra fifandraisana akaiky dia sarotra, saingy tanjona azo tratrarina amin'ny fanatsarana ny tena manokana ary mety misy torohevitra sasany.
Inona no atao hoe firaisana?
Raha te hahalala bebe kokoa hoe inona ny tahotra firaisana ara-nofo, dia mila mahatakatra ny maha-sarotra ny firaisana.
Misy karazany efatra ny fifandraisana akaiky.
Ny fifamatorana dia atao amin'ny alàlan'ny fifanakalozan-kevitra lalina sy ifanakalozana hevitra.
Raha te hizara ny hevitrao tena madio sy madio indrindra amin'ny olona iray hafa dia mitaky herimpo sy finiavana hiatrika fitsarana ny fahitana an'izao tontolo izao sy ny zavatra inoanao.
Tsy zavatra omentsika matetika ny olona sendra izany. Matetika, io olona io dia olona akaiky antsika, te-ho akaiky azy, na manaja ampy hanaovana an'io dinika io.
Ny firaiketam-po ara-pihetseham-po no tadiavin'ny olona rehefa mieritreritra firaisana.
Ny fananana fifandraisana akaiky sy ara-pientanam-po amin'ny olona iray hafa izay avelanao ho mora tohina amin'izy ireo.
Anisan'izany ireo olona mahatsapa fa manana fifandraisana ara-panahy amin'ny olona hafa.
Ny olona dia mety mifamatotra amin'ny alàlan'ny fiaraha-mientana, zavatra mahaliana na zavatra niainana.
Izany dia mety ahitana zavatra toy ny vondrona mpanohana, izay misy ny mpanatrika dia olona rehetra izay manana aretina na traikefa niarahana.
Mety ho traikefa tsy mitanila ihany koa izany, toy ny fahatsapana ho akaiky olona hafa ao amin'ny klioban'ny fialamboly izay iraisan'ny olona fitiavana.
Manazava ny tena ny firaisana. Ny firaisana ara-nofo dia fomba iray iraisan'ny olona hieritreretana momba ny firaisana.
Raha ny tena izy, dia ny fifanakaikezana amina olona hafa na olona iray dia marefo amin'izy ireo, na dia tsy ao anatin'ny tontolon'ny fifandraisana manokana manokana aza izany.
Karazan-tahotra samihafa amin'ny firaiketam-po
Ny karazan-tahotra isan-karazany dia tena tonga amin'ny tahotra fahaverezana.
Tahotra fanariana matetika dia miorim-paka ao anaty tahotra ny fahaverezan'ny hafa, ny fahaverezan'ny mpiara-miasa aminy.
Matetika izy io dia avy amin'ny fahaverezan'ny olon-dehibe manan-danja amin'ny fahazazany. Ny fandaozana azy ireo tamin'ny fahazazany dia mety ho ara-batana na ara-pihetseham-po.
Fialana ara-batana dia rehefa tsy eo amin'ny ara-batana eo amin'ny fiainan'ny zaza intsony ny sarin'ny ray aman-dreny.
Fialana ara-pientanam-po dia rehefa tsy afaka manome na tsy manome ilay karazana fanohanana ara-pihetseham-po ilain'ny zaza amin'ny fivoarany ny olon-dehibe. Mety hitranga izany noho ny traikefa mampivadi-po, ny fidorohana zava-mahadomelina, na ny aretin-tsaina.
Fahatahorana ny fandringanana dia tahotra ny mamoy tena amin'ny fiarahana .
Mety tsy ho tsapan'ilay olona fa avela hanana fetra izy ireo na mieritreritra fa mila mahafoy ny ampahany betsaka amin'ny tenany izy ireo, manova ny fiainany amin'ny fomba lehibe, na manova ny olona tokony hisy azy ireo amin'ny fifandraisana.
Tsy misy amin'ireo zavatra ireo no marina amin'ny fifandraisana salama. Eny, miova ny fomba fitondranao fiainana, saingy tsy mila miova tanteraka izany.
Ny fahatahorana fifandraisana akaiky dia mety hiseho ihany koa amin'ireo olona manana aretina mitebiteby na phobia ara-tsosialy.
Ireo olona izay miaina ireo olana ara-tsosialy ireo dia sahirana amin'ny fiatrehana fitsarana sy fanombanana, izay mahatonga azy ireo ho sarotra amin'ny fitadiavana fisakaizana lalina, fifandraisana, na fifandraisana akaiky.
Ny fitsarana sy ny fanombanana dia ampahany manan-danja amin'ny famoronana finamanana, satria izany no fomba isafidianantsika izay olona tiantsika hanome ny fotoantsika sy ny saintsika.
Ny olona sasany dia mety hanafina ny fahatahorany ny maha-akaiky azy ao ambadiky ny fampiasana ny tambajotra sosialy, izay ahafahan'izy ireo miseho manana 'namana' an-jatony nefa tsy manana fifandraisana lalina na manokana amin'ny olon-kafa.
Izy ireo koa dia mety manana namana tsy dia lehibe loatra izay tsy dia andrasana firy amin'ny karazana fanoloran-tena na asa ara-pientanam-po.
Ireo antony mampidi-doza amin'ny famoronana tahotra ny firaiketam-po
Ny ankamaroan'ny tranga mety hampidi-doza dia miverina amin'ny fahazazana miaraka amin'ireo tarehimarika tsy azo atokisana momba ny ray aman-dreny izay mitarika ho amin'ny fifamatorana sy ny fatorana olana rehefa olon-dehibe. Ireo antony mety hampidi-doza ireo dia mety ahitana:
- Aza miraharaha. Sady ara-batana no ara-pientanam-po.
- Fanararaotana. Firaisana ara-nofo, ara-batana, am-bava na ara-pientanam-po.
- Very ray aman-dreny. Fisaraham-panambadiana, fahafatesana, na fonja.
ny sipako tsy manam-potoana ho ahy noho ny asa
- Fanararaotana zava-mahadomelina. Alkoholika na fidorohana zava-mahadomelina.
- Faharariana. Ny aretina izay tsy ahafahan'ny ray aman-dreny manome fanampiana ny ray aman-dreny sahaza ilay zaza, na manery ny zanany hanana andraikitra hikarakara ny ankizy hafa.
- Fianakaviana manana ny hatezerana. Ny fianakaviana mikorontana dia karazana vatan'ny fianakaviana izay manjavozavo ny fetra.
Matetika mitranga eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka izay tsy nametrahan'ny ray aman-dreny fetra mety.
Izy ireo dia mety hanao zavatra toy ny dote amin'ny zaza manokana amin'ny fandaniana ny ambiny, ny maha-sakaizan'ny zaza azy indrindra, ny tsiambaratelo momba ilay zaza, ary ny firotsahana be loatra amin'ny zava-bitan'ilay zaza sy ny asany.
Ny fianakaviana voatrohitra matetika dia toa be fitiavana sy manohana, saingy mirona hanana olana lehibe amin'ny famerana ny fetra, ny fampiharana ny sisintany, ny fahaleovan-tena ary ny fifandraisana akaiky izy ireo.
- Traikefa mahatsiravina. Ny traikefa manaintaina, indrindra ireo olon'ny fahefana, dia afaka mamolavola ny fahaizan'ny olona matoky sy mifandray amin'ny hafa ao anaty sy ivelan'ny fianakaviana.
- Fanandramana fifandraisana ratsy. Ny fifandraisan'ny olona iray mandritra ny androm-piainany dia afaka mampitombo sy manamafy ny tahotra fifandraisana akaiky koa.
- Ny aretina tsy azo atao amin'ny olona. Ny fikorontanan'ny toetran'ny persona dia fantatra ihany koa amin'ny fikorontanan'ny tebiteby ary heverina fa misy vokany izany any amin'ny faritra misy ny 1,5% - 2,5% ny mponina .
Ny olona manana aretina misoroka ny toetran'ny olona matetika dia miala amin'ny toe-javatra ara-tsosialy noho ny tahotra ny fahafaham-baraka, ny fitsarana ary ny fiheverana diso tafahoatra amin'ny tsikera. Mety saro-kenatra izy ireo, saro-kenatra ary tsy mahatoky tena.
Ny tsingerin'ny fifandraisan'ny Push-Pull ary ny fomba hialana amin'ity Dynamic ity
Soritr'aretin'ny fahatahorana ny firaisam-po
Ny fahatahorana ny fifandraisana akaiky dia mety tsy hitovy arakaraka ny karazana fifandraisana.
Matetika, ny tahotra dia mety hitovy amin'ny fihetsika mifanohitra amin'ny zavatra ezahin'ny olona atao.
Ny olona iray te-hanana fifandraisana tantaram-pitiavana dia mety hanamontsana ny fandrosoany manokana amin'ny famolavolana izany fifandraisana izany amin'ny alàlan'ny zavatra maika, mifikitra be, tsy mamaly lahatsoratra na antso, na mitsapa ny fihetsem-pon'ny hafa ao anatin'ny fifandraisana.
matahotra ny fihetseham-pony ho ahy ve izy
Anisan'ny fitondran-tena ny:
1. Fiarahana mampiaraka
Ny olona matahotra tahiry ho akaiky dia matetika afaka miasa eo amin'ny sehatry ny fifandraisana.
Mety hankafizin'izy ireo mihitsy aza ny mifankahalala amin'ny dingana iray hafa raha mbola tsy naneho ny faritra lalina indrindra amin'ny maha-izy azy ireo ny mpiara-miasa.
Izy ireo dia misoroka ny fifandraisana amin'ny ambaratonga akaiky amin'ireo olona miaraka amin'izy ireo ary mivezivezy isaky ny olona satria ao anatin'ny faritra mampionona azy ireo izany. Mety manana fifandraisana fohy sy fohy izy ireo.
Mety hiseho fa manana a tahotra fanoloran-tena ety ivelany, fa ny tena tahotra ny fisakaizana no manakana azy ireo tsy hanao.
2. Fifandraisana sabotaging
Ny fanaovana sabotage ny fifandraisana dia mety misy endrika maro. Mety ho avy amin'ny inona izany matoatoa mandritra ny vanim-potoana samihafa mba hanakiana be loatra sy hiady amin'ny vadin'izy ireo.
Ilay olona dia mety hihetsika mampiahiahy tsy tapaka ary miampanga matetika ny mpiara-miasa aminy amin'ny zavatra tsy nataony.
Mety hiezaka ihany koa izy ireo hanao ny tenany ho tsy tiana amin'ny fihetsika feno fankahalana na habibiana mba hanerena ny hafa handao azy ireo hahafahany mandresy lahatra ny tenany fa tsy tiana izy ireo ary tsy mendrika.
3. Fifandraisana ara-batana
Ny olona matahotra tahotra firaisana dia mety tsy hisoroka ny fifandraisany ara-batana, na dia mety hitranga aza izany.
Mety hiezaka mafy koa izy ireo hifandray ara-batana be loatra, ka mila mikasika hatrany na ao anatin'ny habakan'ny olon-tiany.
4. Ny fahalavorariana
Ny fahalavorariana dia mety ho fomba iray amin'ny fandoavana be loatra ny olona izay mahatsapa fa tsy mendrika hotiavina, hotohanana ary hajaina izy.
Mety miasa loatra izy ireo na mitazona trano maloto hanehoana fa mendrika izy ireo.
Ny olana dia manelingelina ny fiainana fiainana ny fahalavorariana. Ary vitsy dia vitsy ny olona afaka miaina mifanaraka amin'ny fenitra andrasan'ny perfeksionista, ka manilika olona hafa tsy nahy izy ireo.
5. Fahasarotana amin'ny fifandraisana
Ny olona mahatsiaro tena ho tsy mendrika dia mety tsy hampahafantatra ny zavatra ilainy amin'ny sakaizany, ka manomboka tsy tanteraka ny zavatra ilainy.
Tsy mampifandray ny filany izy ireo satria tsy te hiteraka korontana ary mety hahatonga ny olon-tiany handao azy ireo.
Mahatonga lolom-po sy fifandirana izany satria mihaona ny filan'ny mpiara-miasa iray.
Ilay olona matahotra tahotra firaisana dia mankahala ny sakaizany, milaza amin'ny tenany fa tsy tokony ho mendrika fitiavana sy fanohanana izy ireo raha toa ka tsy manandrana mamaly ireo filàna ireo ny mpiara-miasa aminy, na dia tsy nampahafantatra ny zavatra ilain'ny mpiara-miasa aminy aza izy ireo.
Mety hiteraka fisarahana izany raha tsy voaresaka.
Ahoana raha matahotra ny ho akaiky ny namako?
Mifantoha amin'ny fampivelarana sy hikolokoloana ny fifampiresahana amin'ny vadinao.
Anontanio izy ireo hoe inona no hahatonga azy ireo hahatsapa ho tiana sy voaro.
Anontanio hoe inona no hanampy azy ireo hahatsapa ho mahazo aina amin'ny fiarahana.
Ary amporisiho izy ireo hangataka fanampiana amin'ny matihanina.
Matetika ny tahotra fisakaizana dia avy amin'ny toerana manta sy marefo izay mila zahana tsara.
Ny fizotry ny fandresen-dahatra ny tahotra fifandraisana akaiky dia sarotra ary mety hisy ny fihemorana. Ny faharetana sy ny hatsaram-panahy dia ampahany lehibe amin'ny fanohanana olon-tiana amin'ny alàlan'ny fahasitranany.
Hanao fahadisoana izy ireo ary mety handany fotoana tsy misy fihatsarana indraindray. Ny ampahany manan-danja indrindra amin'izany fahombiazana izany dia ny fiezahany hatrany sy hiasa ho amin'izany.
Mandresy ny tahotra firaiketam-po
Ny famaritana sy ny fitsaboana ny tahotra fifandraisana akaiky dia miankina amin'ny haben'ny hamafin'izany sy ny antony ahatsapanao izany tahotra izany.
inona no dikan'ny hoe ao anaty fiarahana manolo-tena
Satria io tahotra io matetika dia avy amin'ny traikefa maharary sy mampivadi-po,tsara indrindra ny manatona mpitsabo aretin-tsaina voamarina momba ny fomba fiasa sy handresena ny tahotra.
Ny firesahana ny antony - ny fototry ny fahatahoranao ny fifandraisana akaiky - dia tena ilaina amin'ny fanasitranana sy ny fanarenana ny olana. Raha tsy manamboatra ny fototra ianao, dia tsy ho tsara ny rafitra sisa apetrakao eo amboniny.
Mety hanohy hanana olana fanampiny ianao amin'ny fiarahana akaiky izay heverinao fa hovahana, saingy tsia, satria mbola tsy mafy io fototra io.
Noho izany dia miresaha amin'ny mpanolotsaina iray momba ny fahasalamana ara-tsaina momba izany raha toa ka sahirana amin'ny firaisana. Izy ireo dia ampy fitaovana tsara indrindra hanampy anao hahita ny fototry ny olana sy hanamboatra azy io.
maninona aho no tsy miraharaha intsony
ahoana ny fomba hahatonga ny olona tsy ho tia anao
Ny sipa no manome tsiny ahy noho ny zavatra nataony
maninona aho no olona mahatsiravina toy izany